UniProyecta - Waxbarashada da 'kasta
Lambarada oo ku qoran Ingiriis
Buugaagta Axdiga Cusub ee Kitaabka Quduuska ah
Salaan akhristaha qaaliga ah, waan kugu soo dhaweynaynaa UniProyecta. Halkan waxaan u maleyneynaa taas waxbarashada iyo dhaqanku waa inay u ahaadaan lacag la’aan dadka oo dhan, nin ama naag, ilmo ama qof weyn. Sidaa darteed, boggan waxaad ka heli doontaa aqoonta in aan ku soo ururinnay qaab maqaallo ah si aan kaaga caawino tababarkaaga. Haddii aadan hubin sida loo helo waxaad raadineyso, waxaan kaa caawin doonaa soo koobitaan kooban oo ah waxaad ka heli doonto goobtan.
Mid ka mid ah awoodaheena ayaa ah luuqadda Faransiiska, oo aan ku barannay mahadnaqa buugaagta iyo safarada aan ku tagno France iyo Canada. Qeybtaan waxaan ku baranaa casharro heer kasta ah: laga bilaabo bilow ilaa kan ugu horumarsan.
Bilaha sanadka ee Faransiiska
Fikradaha Faransiiska: maxay yihiin?
Saacadaha Faransiiska: sidee baad u tiraahdaa?
Lambarada Faransiiska laga bilaabo 1 ilaa 1000
Falka faransiiska: liis, layliyo iyo isku xidhnaan
Xidhiidhiyayaasha Faransiiska: liis iyo tusaalooyin
Xarfaha Faransiiska iyo ku dhawaaqistiisa
Maanta suurogal maaha in aan loo baahnayn aqoonta Ingiriisiga. In telefishanka, shabakadaha bulshada iyo ciyaaraha fiidiyaha waxaad ka heli doontaa qaybo ama ereyo laga soo qaatay Ingiriiska. Sidaa darteed, waxaan u diyaarinnay maqaalladan si barashada ingiriisiga oo hagaajiya heerkaaga.
Maalmaha toddobaadka oo af ingiriisi ah
Weedho jaceyl oo af Ingiriis ah
Bilihii sannadka oo af Ingiriis ah
Lambarada Ingiriisiga laga bilaabo 1 ilaa 1000
Shaqalada Af -Ingiriisiga: Cod -bixinta iyo Ku -dhawaaqidda
Falalka oo Af -Ingiriisi ah
Sifooyin lagu tilmaamo qof af Ingiriis ah
Dabcan, dhammaantood ma aha Ingiriis ama Faransiis, waxaa jira luqado kale oo aad u fiican oo waxtar leh oo wax lagu barto. Ruush, Shiine, Jabbaan ama Talyaani ayaa ah tusaalooyin ka mid ah waxa aan diyaarinay.
Lambarada Jarmalka laga bilaabo 1 ilaa 1000
Lambarada Carabiga 1 ilaa 1000
Lambarada Basque laga bilaabo 1 ilaa 100
Falalka Catalan: liis iyo isku xidh
Xidhiidhiyayaasha Jarmalka: liisaska iyo tusaalooyinka
Magacyada Boortaqiiska: ku dhawaaqida iyo tusaalooyinka
Lambarada Ruushka iyo ku dhawaaqistooda
Lambarada Shiinaha laga bilaabo 1 illaa 100
Lambarada Boortaqiiska laga bilaabo 1 ilaa 100
Lambarada Jabaaniiska 1 ilaa 50
Lambarada Talyaaniga 1 ilaa 100
Hadda waxaan u jeednaa qaybta dhaqanka, gaar ahaan waxaan dib u eegi doonnaa asalkayagii, Giriigii Hore. Ma jirto wax ka fiican sheeko wanaagsan oo ilaahyo iyo dagaalyahanno ah si maskaxda loo nadiifiyo waxna loola barto awoowayaasheen.
Khuraafaadka Achilles iyo Cidhibtiisa
Khuraafaadka Prometheus iyo Pandora
Khuraafaadka Giriigga ee Carruurta
Ugu dambayntiina, qaybtaan waxaan ku darnaa wax kasta oo aan meel ku lahayn qayb gaar ah.
Lambarada ugu muhiimsan 1 ilaa 10.000
Lambarada Masaarida 1 ilaa 100
15ka magaalo ee ugu dadka badan Spain
Ducooyinkii loo qaabilay qaali
Tirooyinka Roomaanka laga bilaabo 1 illaa 1000
Darajooyinka ciidamada Mareykanka
Lambarada Mayan 1 ilaa 1000
Lambarada Aymara 1 ilaa 100
Tirooyinka Guarani 1 ilaa 100
Waana intaas! Waxaan rajaynaynaa inaad ku raaxaysato joogitaankaaga UniProyecta Xusuusnowna haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama dhibaatooyin ah waad nala soo xiriiri kartaa adigoo adeegsanaya foomka xiriirka ama qeybta faallooyinka ee cashar kasta dhammaadkiisa. Salaan, netizen!
UniProyecta waa adiga geeska dhaqanka iyo waxbarashada bilaash ah internetka. Baro luqadaha oo ku qanci xiisahaaga maqaalladaada iyo casharradaada.